Waxa la sheegay in arinta harada taana loo asaasay xarun cilmi baadh iyo aqoonta ah – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in arinta harada taana loo asaasay xarun cilmi baadh iyo aqoonta ah
Waxa kale oo la sheegay in la dhayalsaday arimaha dalka ka jira awgeed haramaha ama geedka qalaad ee kaligi noolaha ah ee harooyinka qalajiya ee inboojka loo yaqaano ee biyahaasi qariyay.
Waxa wargayska addis maleda uu waramay wakaalada horumarinta ilaalada harada taana iyo qaybaha biyaha kale oo sheegay in la sameeyaya xarun cilmi baadh iyo aqoonta ah oo xogta u soo gudbinaysa cida ka faaidaysata.
Waxa la sheegay in wakaalada oo fadhigeeda ka dhigataya dalka germanka oo la kaashatay ha’ayad ka shaqaysa hawlaha dabiicga ah oo la yidhaahdo “naabu” in arimaha la xidhiidha harada taana iyo biyaha xogta dhabta ah si looga helo ka shaqaysa, in la bilaabay labo bilood ka hor xarun laga dhax dhisay wakaaladu meesha ay ku taalo.
Waxa wargayska addis maleda u waramay madaxa horumarinta wakaalada ilaalada harada taana iyo biyoyawga kale ee deegaanka amxarada Dr. Ayaalew Weldhu waxana uu sheegay in xaruntan cilmi baadhka ee la asaasay ay gaadhsiin doonto xogaha la xidhiidha iyo si loo yareeyo lacagaha ku baxa iyo wakhtigaba dhaqdhaqaayo ku aadan ilaalada oo cusub iyo horumarka oo ka caawinaysa si loo kobciyo, jaamacado kala duwan, xarumaha ku hawlan cilmi baadhka, cilmi baadhayaasha, soo saarayaasha nidaamyada iyo bulshadaba.
Maareeyuhu waxa kale oo u sheegay in xaruntan markii ugu horaysay ee la asaasayay loogu talo galay in harada taana iyo biyayawga kale iyo wabiyada deeganka amxarada ka jira iyo dhulka biyuhu ay fadhiyaan lagu ilaaliyo oo lagu horumariyo. Xiligan xaadirka ahna meelaha biyuhu ay fadhiistaan oo laga ilaaliyo in biyuhu ay gudhaan ka sakoow harada taana iyo meelaha kale ee biyu ay ka jiraan oo cilmi baadh ku haboon lagu sameeyo oo laga qoro qoraalo hawlo cilmi baadh ah in xaruntaasi loo sameeyo ay muhiim tahay oo la goa’amiyay.
Waxa kale oo uu sheegay in sidaas darted xog kasta oo harada taana ku saabsan laga helo xaruntaasi oo cilmi baadhayaasha iyo ardayda loo baneeyo si loo awoodo. Arintanina waxa ay fa’aido hor le u yeelanaysa biyoyawga halkaasi ka jira si loo ilaaliyo oo loo horumariyo.
Waxa kale oo intaasi dheer oo la sheegay in xaruntani ay ardayda iyo cilmibaadhayaasha bilawga ah ay xogaha ku saabsan harada taana, wabiga abaay, biyo xidheenka, sidii ay u soo gaadhi lahayeen dal xiisayaashu iyo dhaqdhaqaaqyo mashaaric lagu horumarinaayo xogtooda sidii lagu heli lahaa mid ka caawinaysa ay tahay. waxa kale oo la xusay mashruucan laga bilaabay deegaanka axmaarada hadii u noqdo mid laga faaido in deeganada kale ee qaybaha biyahu ka jiraan si loo ilaaliyo hawl la mid ah laga qsamayn doono.
Waxa kale oo la sheegy in xaruntan cilmi baadhka lagu bilaabay dhawr xirfadlayaala ah oo agabyada ay ku shaqaysan lahayeenna ay u dhamays tiranyihiin, labo todobaad ka dibna hawshooda si toos ah hawsha loo bilaabi doono.
Dhinaca kalena waxa la sheegay in roobabki karanta ee da’ay awgeedna ay biyaha harada taana kordheen oo geedka qalaad ee kaligi noolaha ahaa ee inboojka loo yaqaanona u yaraaday hada ka hor imikana soo korhday. Ayaalew waxa kale oo uu sheegay in arintan ay ka muuqato in lagu ilaaway arimaha dalka ka jira xiligan xaadirka ah oo looga baahanyahay mustaqbilka dawlada iyo bulshaduba in ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyada hawshaasi.
Waxa la ogsoonyahay in sanadki 2008dii harada taana iyo muuqaalka dhulka ee harada taana oo ah meesha kaliyaata dalka ee qaybta ay biyuhu ka jiraan ee laga diwaan galiyay ha’ayada qaramada midoobay ee sayniska iyo dhaqanka ee UNESKO.
Total views : 6693283